XOG: Somaliland oo xirtay sarkaal sare ‘oo jaajuus u ahaa sirdoonka Soomaaliya | Warmaalnews.com
XOG: Somaliland oo xirtay sarkaal sare ‘oo jaajuus u ahaa sirdoonka Soomaaliya
Hargeysa (Warmaal news.com) ― Sida ay -warmaal news- u sheegen ilo-wareedyo xog-ogaal ahi, waxaa saldhiga dhexe ee Hargeysa muddo laba todobaad ah ku xidhan, Yaasir Saleebaan oo ah xidhiidhiyaha guud ee wasaarada arrimaha gudaha Somaliland iyo hay’adaha caalamiga ah ee ku shaqada leh amniga.
Sida ay ilo-wareedyo amni u xaqiijiyeen -Warmal News-yaasir ayaa loo haystaa eedeymo culus, sida khiyaamo qaran iyo bixin sir qaran oo muhiima oo uu u gudbiyey sirdoonka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Somaliland weli wax faah-faahin ah kama aysan bixin habka uu Yaasir ula shaqeynayey sirdoonka Soomaaliya iyo xogta uu u gudbiyey nooca ay tahay, haddiiba ay jirto.
Yaasir Saleebaan ayaa waxa la shaqo geliyey xilligii xukumadii Siilaanyo talada haysay, waxaana markaas mar loo xidhay kadib markii lagu helay khiyaamo iyo inuu fojar-gareeyay, hab khaldanna u adeegsaday saxeexii wasiirka arimaha gudaha xilligaas Waran-cade.
Si kastaba, waxaa lagu sii daayey Yaasir qaab beelaysan maadaama uu Siilaanyo oo xiligaas talada hayey adeer dhaw u ahaa, ka hor inta aan dhowaan dib loo xirin.